Runako Unofanidza Injini: Yakasarudzika AI Mazano Anotyaira Online Runako Kutengesa | Martech Zone
Muvhuro, July 27, 2020 Muvhuro, July 27, 2020 Douglas Karr
Hapana-munhu angadai akaziva iyo apocalyptic mhedzisiro iyo COVID-19 yaizove nayo muhupenyu hwedu hwezuva nezuva uye hupfumi uye kunyanya kushambadzira nekuvharwa kwemazhinji anotungamira epamusoro emigwagwa zvitoro. Yakagadzirwa mhando, vatengesi, uye vatengi vese vanofungisisa ramangwana rekutengesa zvakare.
Runako Matches Injini
Runako Matches Injini™ (BME) mhinduro kune vakanaka vatengesi, e-tailer, supamaketi, vanogadzira vhudzi, uye zvigadzirwa. BME inyowani chena-yakanyorwa AI-based personalization engine iyo inofungidzira uye inogadzirisa sarudzo yezvisarudzo vatengi vangangotenga. Zvakare nekukwanisa kukurudzira zvigadzirwa BME inogadzirisa ese mapoinzi erwendo rwevatengi rwepamhepo kubva kumusoro-kutengesa kuburikidza nekumhara mapeji.
Semhizha muzvinabhizimusi, uyu haasi iye muvambi Nidhima Kohli'' mhinduro yekutanga yedhijitari. Nidhima ndiye zvakare muvambi we My Runako Matches™ (MBM), yakavambwa muna2015 uye kubvira ipapo yave yekutanga kurudziro yezvinhu zvakagadzirwa nerunako uye saiti yekuenzanisa mutengo inova imwe yeakanyanya kunaka mawebhusaiti pasirese pamusoro pe400,000 zvigadzirwa.
MBM yakabatana nevamwe vevatengesi vakanakisa uye mhando dzinosanganisira Harrods, Harvey Nichols, Liberty, Look Fantastic, Clarins, Bobbi Brown, nezvimwe, zvichibvumira vatengi kuti vatengese vese kubva pawebhusaiti imwechete uye vachienzanisa mitengo. Nekuda kwekudzidza kubva kuMBM, Kohli akakwanisa kutora makore mashanu e data, kuongorora maitiro ekutenga evatengi nekuaisa kune yake nyowani bhizinesi modhi BME inoitirwa kupa kukosha kwakakosha uye maitiro ekuzvibata kumaB2B's.
Maitiro AI AI Kuita Kwako Anotyaira Shanduko
Runako Unofanidza Injini inoshanda zvese zviri zviviri, nekuita kuti vatengi vapinze ruzivo rwavo vachishandisa iyo Virtual Mutevedzeri kwese kwese pamhepo kuti uwane yekudyidzana yekuongorora maitiro masitayera nezveganda ravo mhando, kunetsekana kweganda, bvudzi nemuviri kunetsekana, uye chigadzirwa kana hwema zvaunofarira.
Iyi data inobvumira BME kushandisa AI uye data kuitira kukurudzira zvigadzirwa zvakanaka ipapo. Izvo zvinoshandawo zvisina basa, nekucherechedza kutenga uye kubhurawuza maitiro. Iyo chaiyo-nguva imba svirova Mhinduro inoshandura runako rwevatengi ruzivo nekugonesa yakasarudzika, yakasarudzika kusangana pane yega yega yekubata parwendo rwavo rwekutenga pamhepo kubva kumusoro-kutengesa kune kumhara mapeji uye zvigadzirwa zvigadzirwa.
NeBME, vatengi vanowana imwe-ne-imwe, mu-chitoro mutengesi mutengesi sechiitiko online uye kubva kunyaradzo yeimba yavo. Sezvo zvitoro zvave kuvhurwa, BME inogona zvakare kuitiswa pazvitoro zvekubata-bata muchitoro kuti igadzire inoshanda omnichannel zano. Iyo yepamusoro iyo chikamu che kuita munhu uye mazano iyo inopa vatengesi zvekugona zvine hungwaru pasina kuivaka.
Uye, ikozvino kupfuura nakare kose kushandurwa kwekutengesa kutungamirwa nenyika nyowani post-COVID pane zvakawanda zvekudikanwa kwechitoro chikamu kuita BME chikuva kuona kubudirira uye zvakanyanya kukosha kupona kwebhizinesi ravo mune yanhasi isina kugadzikana mamiriro ekunze.
Ino inguva yekutanga nakare kose, chishandiso chemunhu kugadzirirwa chakanangana neindasitiri yerunako uye chinofambiswa nemukwikwidzi dhata iro risinganzwike zvachose kumberi.
Saka BME Inoshanda Sei?
Nekubatanidza AI nerunako rwakananga huchenjeri uye zvakare makore mashanu emukwikwidzi ungwaru, BME inoshandisa zvine simba muchina kudzidza algorithms kuona nuanced mapatani mukati mevatengi maseteti. Mune mamwe mazwi, BME inoratidza inodiwa zvigadzirwa zera nezera, kunetsekana kweganda uye mapatani ekutenga. Vatengi pavanoshanyira chitoro chepamhepo, ruzivo rwakawanda icho chishandiso chinodzidza uye chinogadzirisa otomatiki.
Injini inodzikisira sarudzo yemutengi, ichifungidzira kuti mutengi angangotenga chigadzirwa chipi, achiwedzera kutengesa, uye kuvimbika. BME inosarudzira zvigadzirwa zvechigadzirwa, zvinowirirana zvigadzirwa, maemail, mapeji ekumhara, uye zvimwe kuitira kuti vatengi vawane yakakwana 360-degree yakasarudzika ruzivo rwunopa kune kugadzirisa kutendeuka kwekutengesa ne30 kusvika ku600%.
BME yakanyatsogadziriswa muUK neiyo French Pharmacy avo vakatoona kuwedzera kwe50% muAoV (Avhareji Order Value) uye ne400% kuwedzera mumatengo ekushandurwa kuita kutengesa. BME yakabatana zvakare ne premium cosmetic brand NaTerry uye mumwe wevatengesi veRunako hombe Douglas.
Kubva pane ongororo dzichangobva kuitika, BME yagadzira 18m kunaka kwechigadzirwa zvigadzirwa kusvika zvino. Yakawedzera iyo avhareji kukosha kukosha neinoyevedza 50% uye yakawedzera huwandu hwekushandurwa kukutengesa neasingave 400%.
Runako Kufananidza Injini Yakasarudzika Kutengesa Chirevo
BME inotora inoshanda omnichannel nzira yekutengesa sezvo ichishanda pamhepo, app, email, uye muchitoro. Kunyanya kukosha, BME inogoneswa nemukwikwidzi dhata uye runako ruzivo rwekuchenjera kubva kune cosmetic masayendisiti anoita BME inotengeswa runako machisa ™ yakanyatsoita, ichokwadi, uye yakavimbika maererano nemhedzisiro yemunhu. Uye, aya machisi anobatsira izvo chaizvo zvinodiwa nemutengi kubva paminiti yavanosaina, zvakasiyana nemamwe mapuratifomu ayo anotora nguva yakareba kuti adzidze maitiro emutengi.
Kubva pane bhizinesi maonero iyo plugin inotora vatengi chete 1-2 maawa kuti aite saka haina simba rakakura pazuva-nhasi kumhanya kwebhizinesi ravo uye sezvo iri yakabatanidzwa chikuva iyo inogadzirisa neAI otomatiki, vatengi vanogona kukwazisa ruoko kune nguva inopedza zvinyorwa zvemanyorerwo.
Ndeipi BME Yakasiyana?
Mukuenzanisa nezvimwe runako personalizations mapuratifomu pamusika, BME haipe chete zvigadzirwa kurudziro zvichibva pamubvunzo asi zvakare inofanotaura maitiro evatengi uye inogadzirisa YEMAHARA yekubata kune YEMAHARA ese maratidziro kubva kubvudzi kusvika kunhuwirira kune ganda uye muviri nezvipikiri. Iyo yakasarudzika runako yakasarudzika yakasarudzika chikuva iyo inongokurudzira izvo zvakanaka zvigadzirwa uye mavara ayo anoshandira yega yega runako chikamu kubva kune yekuchenesa ganda kune vhudzi uye kwete kwete chete chikamu chimwe chakanyanya kukodzera kumutengi. Zvakare, sezvo ichipihwa simba nemakore mashanu edata, inogadzira kusimudzira kune vatengi vayo uye neruzivo rwevatengi kubva pazuva rekutanga.
Parizvino pamusika pane akawanda madhigirii mazana matatu emadhigirii ekugadzirisa ayo asina kugadzirirwa runako sezvo iwo asiri iwo chaiwo runako, saka iwo haape zvakafanana 360% kusimudzira mukutengesa senge kushandisa runako chaiyo mhinduro kana ivo vanotora 400-3 mwedzi kusvika chaizvo kuratidza kusimudzira uye zviri chaizvo zvemanyorerwo.
Runako Unofanidza Injini ine nzira yekuvandudza hunhu hwese hwevatengi pazvinhu zvese zvekubata kubatsira vatengi kuwana yavo Yekunaka Matches ™ kungave kuburikidza neiyo Virtual Runako Mubatsiri ficha kana isina mune yepositi COVID yenyika. Tinotarisira kukurumidza kuvandudza kwavo nekuvaunzira network uye hunyanzvi muindastiri yerunako.
Camille Kroely, Global Musoro weOpen Innovation & Dhijitari Services
Tiye ramangwana idhijitari uye kubudirira kwerunako chitoro… .is Runako Unofanidza Injini ™.
Tags: airunakorunako inowirirana injinisvirovaBobbi BrownClarinsHarrod'sHarvey NicholsrusunungukoTarisa Unoshamisaonline shoppingmunhu zvichienderana kugutsikanazvinongedzo zvemunhurecommendations
Maitiro Ekugadzira iyo #Hashtag Makwikwi paSocial Media